Global Voices teny Malagasy » Miezaka Mandika Ilay Tenin’i Trump Hoe “Shithole” Ny Fampitam-baovao Japoney · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2018 5:44 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Karaiba, Haiti, Japana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fiteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
“Donald Trump, Tsy Misaina.” Sary nataon'i Liftarn . Azon'ny rehetra ampiasaina.
Ny Alakamisy 11 Janoary, niteraka resabe  avy hatrany ny filazan'i  filoha Amerikana Donald Trump fa “firenena vongany”  i Haiti, El Salvador ary ny firenena aty Afrika .” Na dia maro aza ny famoaham-baovao amin'ny tontolo miteny Anglisy no niady hevitra  ny momba ny hamerenana indray na tsia ilay ompan'i filoha Amerikana, ireo mpanao gazety miasa amin'ny fiteny hafa kosa dia niezaka ny fandikana ara-bakiteny ilay teny hoe “shitole (vongany)”. Tsy niavaka ny fampitam-baovao Japoney .
Raha nahatakatra avy hatrany ny dikan'ilay teny nampiasain'iny Filoha ireo miteny Anglisy maro, ho an'ireo tsy miteny Anglisy kosa dia mety ho sarotra ho azy ireo ny mahazo avy hatrany ny dikan'ilay teny hoe “shithole”. Mamaritra ilay teny hoe “toerana tena maloto, rotidrotika, na toerana maharikoriko” ny diksionera Oxford .
Na izany aza, nisafidy ny hampiasa ny dikanteny mivantana ny sasany tamin'ireo sehatra fampahalalam-baovao Japoney. Ohatra, samy nandika ny teny hoe “shithole” ho “benjo” (便 所) avokoa na ny Asahi Shimbun  , gazety Japoney lehibe iray mpivoaka isan'andro, na ny Jiji , iray amin'ireo sampan-gazety goavana ao amin'ny firenena, teny nomena ny toerana ho an'ny “fidiovana” izay azo adika hoe ” gabone. “
Saingy toa tsy nisy ny fifanarahana tao amin'ny fampitam-baovao Japoney momba ny fomba handikana ilay tenimboton'ny filoha.
Nitatitra ireo dikanteny samihafa ho an'ny “shithole” izay niseho tao amin'ny fampitam-baovao Japoney, sy ny famoaham-baovao amin'ny teny Japoney any ampitan-dranomasina i William Mallard, lehiben'ny biraon'ny Reuters any Japana, ary niteraka fifanakalozan-kevitra teo amin'ireo mpanao gazety sy ny mpanara-maso hafa ny sioka nalefany tao amin'ny Twitter:
Fampitam-baovao Japoney. ny dikanteny farany tamin'ny tenin'i DonaldTrump:
Reuters「不潔な諸国」: “Firenena maloto sy voretra”
Huffington Post「汚い便所」: “Fidiovana maharikoriko”
Sankei「便所のように汚い国」: “Firenena maharikoriko toy ny gabone”
Nikkei「肥だめのような国」: “Lavaka fanariana maloto”
AFP「肥だめ国」: “Lavaka fanariana maloto”
BBC「肥溜めみたいな国」と発言したという : “Lavaka fanariana maloto”
Nanamarika i Mallard fa ny fandikanteny iraisana indrindra hitany dia ny “lavaka fanariana maloto”, na “koudame” (肥 溜 め), lavaka nampiasain'ny tantsaha Japoney efa hatry ny ela  ho fanangonana ny maloton'ny olona ho toy ny zezika. Nihevitra i Mallard, raha nanoratra tamin'ny teny Japoney fa nampiasaina io teny io satria toa midika hoe “lavaka ho an'ny fanangonana maloto “, toy ny fanaon'ny mpamboly taloha ny teny hoe “shit hole”, izay nadika mivantana amin'ny teny Japoney.
Ireo mpitsikera hafa dia niady hevitra momba ny fandikàna ny famaritan'i Trump momba ny firenena Karaiba, Amerikana Afovoany sy ny Afrikana ho “lavaka fanariana maloto” (肥 溜 め), raha mbola nanohy nanoratra ny fiovan'ny teny hoe “shithole” amin'ny teny Japoney kosa ireo mpaneho hevitra hafa.
Tohina izahay navelanao : WSJ 「便 所 の よ う な 国」
Nihevitra izahay tamin'ny voalohany fa 「肥 溜 め」 ihany koa izany, kanefa toa tahaka ny teny “teknika” ihany koa izy io, teny izay nampiasain'ny tantsaha. Tsy nieritreritra mihitsy aho fa hiresaka momba ny fomba handikana ity teny ity ho toy ny ampahany amin'ny asa.
Mainichi: “firenena toy ny gabone”
Kyodo: “firenena maharikoriko”
Newsweek.jp: “Firenena faran'izay feno loto”
Nisy ny famaritana mazava tsara kokoa nomena azy:
Koa satria efa nitarina ireo teny [mba handikana ny tenin'ny Filoha], moa ve izy tsy hoe “firenena tsy misy antenaina” ny tiany holazaina?
Nanolo-kevitra ihany koa i Damian Flanagan, mpandika teny malaza amin'ny boky Japoney fa manome ny fandikanteny ilaina ho an'ny fiteny tsy mihaja an'ny Filoha Amerikana ny Botchan , iray amin'ireo literatiora klasika Japoney:
Tsy tokony hampiasa ny fandikana mivantana ny hoe “shithole” ny Japoney ka handika izany amin'ny dikanteny tranainy… Tamin'ny fiafaran'ny “Botchan” (1906) dia nilaza ny maherifo hoe “Navelako ity shithole ity” (不浄な地を離れた) Tiako ity teny mahafinaritra “不 浄 な 地” ( “Toerana tsy madio”) ity mba hiverina.
Rikoriko amin'ny fiteny manavakava-bolonkoditra sy tenim-boto nataon'i Trump
Na izany aza, nanisy lanjany bebe kokoa ny tian'i Trump ho lazaina ny olona sasany, mihoatra noho ny tamin'ny fomba nandikana izany.
Nilaza ilay mpanatontosa horonantsary fanadihadiana Japoney malaza Soda Kazuhiro, tao anaty sioka iray izay nozaraina in-jatony, fa ao anatin'ny atidohan'i Trump ny “vongany”.
Nandritra ny resaka nifanaovana tamin'ireo mpanao lalàna dia nanondro an'i Haiti sy ny firenena Afrikana sasany ho firenena “shithole” , na lavak'[olombelona] fanariana maloto i Trump, ary tokony handrisika ny fifindra-monina avy any ivelany toa an'i Norvezy i Etazonia, fa tsy ireo firenena “vongany” ireo. Na izany aza, ny hany vongany tokana eto dia ao anatin'ny lohan'i Trump. Tsy misy dikany fa fisainan-dratsy sy loto avy any am-bavany.
Navesa-danja ny fanehoan-kevitra tamin'ny fitenin'i Trump eran'izao tontolo izao sy tany Etazonia.
Niantso ny fanamarihan'i Trump ho “fanevatevana ny maha-olombelona ” ny Governora Jeneraly Kanadiana teo aloha sady Sekretera Jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ao amin'ny Frankofonia amin'izao fotoana, Michaelle Jean, izay teraka tany Haïti.
Jamie Stelter, olo-malaza amin'ny fampitam-baovao ao an-tanandehiben'i New York sady vadin'ny mpanao fanehoan-kevitra amin'ny fampitam-baovao Amerikana malaza, Brian Stelter  dia nisioka hoe:
“Tsy hampiasa ny tenin'i Donald Trump aho androany – tsy noho izaho tsy mbola nampiasa fiteny ratsy mihitsy akory, fa satria mendrika ny hajaina ny mponina ao Haiti sy ny any ivelany rehetra any.”
Nanazava ilay mpanoratra Jonathan M. Katz , izay nanoratra boky iray manadihady ny valintenin'ny Firenena Mikambana tamin'ny horohorontany tamin'ny taona 2010 izay nandrava an'i Haiti, fa ambany noho ny an'ny Etazonia ny fari-piainan'i Haiti vokatry ny politika Amerikana ara-tantara mivantana izay nataony tamin'ny firenena Karaibeana:
Tsy mila mahafantatra na inona na inona momba ny tantaran'izao tontolo izao ianao raha hankalaza ny fandresena momba ny fahasamihafan'ny harin-karena eo amin'i Norvezy sy Haiti.
Anisan'izany, indrindra ohatra ny tsy fahafantarana marina ny tantaran'i Etazonia.
Tao anatin'ny lahatsoratra nozaraina imbetsaka, namintina ny adihevitra momba ny teny hoe “shithole” ny mpisera Twitter iray ary nanondro ny fanavakavaham-bolonkoditra tamin'ny fanamarihan'i Trump izay tsy noraharahiana loatra:
Mahavariana fa mora kokoa ho an'ny sehatra fampitam-baovao ny namoaka ny “shithole” noho ny “mpanavakava-bolokoditra” na ny “fanavakavaham-bolokoditra”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/23/113732/
 “firenena vongany”: http://www.cnn.com/2018/01/12/politics/trump-wsj-interview/index.html
 niady hevitra: http://mailchi.mp/cnn/rs-jan-11-2018
 diksionera Oxford: https://en.oxforddictionaries.com/definition/shithole
 nampiasain'ny tantsaha Japoney efa hatry ny ela: https://www.google.ca/search?q=%E8%82%A5%E3%81%A0%E3%82%81%E3%81%AE&rlz=1CALEAO_enCA762CA762&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_4tSY3dPYAhVU92MKHceoAHQQ_AUICigB&biw=1366&bih=694
 fanevatevana ny maha-olombelona: https://www.theglobeandmail.com/news/national/trumps-remarks-on-african-countries-haiti-insulting-michaelle-jean/article37592870/?click=sf_globefb
 mpanoratra Jonathan M. Katz: https://jonathanmkatz.com/bigtruck/